Axad, Nov 8 , 2020-Dowladda Kenya oo Muqdisho usoo dirtay wafdi dowladda Soomaaliya kalasoo hadla in xayiraada laga qaado Qaadka – LaacibOnline
Axad, Nov 8 , 2020-Dowladda Kenya oo Muqdisho usoo dirtay wafdi dowladda Soomaaliya kalasoo hadla in xayiraada laga qaado Qaadka
November 8, 2020 Abdirisaaq	0 Comments
Wararka Maanta- Axad, Nov 8 , 2020
Axad, November, 08, 2020 (HOL) – Xoghayaha Guud ee Arimaha Dibada Kenya, Danjire Macharia Kamau ayaa gaaray magaalada Muqdisho shalay oo Sabti aheyd, isagoo hogaaminaya wafdi wada hadalo la yeelanaya dowladda Soomaaliya.
Wasaaradda Arrimaha Dibadda ayaa sheegtay in booqashadan oo qaadandoonta saddexda maalmood ah looga gol leeyahay xoojinta xiriirka ka dhexeeya labada dal, iyadoo diirada la saarayo ganacsiga, maalgashiga iyo iskaashiga gobolka.”Kenyanka iyo Soomaalida waa inay diirada saaraan kordhinta ganacsiga, halkii ay ku ekaan lahaayeen arimaha siyaasada,” ayuu yiri Amb Kamau.
Waa wafdigii ugu cuslaa ee Kenya soo dirto tan iyo markii dowladda Soomaaliya ay joojisay ganacsiga Qaadka ka imaan jiray Kenya.
ganacsatada Qaadka ayaa dowladda Kenya cadaadis ku saaray inay soo afjarto khilaafka kala dhexeeya Soomaaliya si xayiraada looga qaado Qaadka, haddii kale waxay ku hanjabeen inay dhigayaan mudaharaadyo ka dhan ah dowladda.
Ujeedada ugu weyn ee uu wafdigaan u yimid waxay salka ku haysaa in dowladda Soomaaliya ogolaato in dib loo fasaxo ganacsiga Qaadka.
11/8/2020 6:16 AM EST
Axad, November, 08, 2020 (HOL)- Iyadoo lagu waddo in labo cisho ka hor magaalada Jowhar lagu qabto doorashada madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa ee dowlad gobolleedka Hirshabeelle ayaa waxaa xilka wareejiyay guddoonka hore ee Baarlamaanka.
11/8/2020 2:22 AM EST
Axad, November, 08, 2020 (HOL)-Waxaa sii xoogeysana dagaalka u dhaxeeya ciidamada difaaca Qaranka Itoobiya iyo jabhada TPLF ee ka dagaalamaya gobolka Tigray-ga ee Waqooyiga dalkaasi Itoobiya.
11/8/2020 1:11 AM EST
Axad, November, 08, 2020 (HOL)- Waxaa sii kordhaya dilalka kooxo madow ah oo la garaneyn dalka Koonfur Africa kula kacayaan ganacsatada Soomaalida ah , iyadoo todobaadydii aynu soo dhaafnay la tiro ganacsatado Soomaali ah.
11/8/2020 12:59 AM EST
Axad, November, 08, 2020 (HOL)- Waxaa sii xoogeysanaya khilaafka dhinaca sharciga ah ee u dhaxeeya Xukuumadda Soomaaliya iyo Guddoomiyaha Aqalka Sare Cabdi Xaanshi Cabdullaahi oo siweyn uga biyo diiday guddiyada doorashada oo ay dowladdu magacaawday.
11/8/2020 12:28 AM EST
Axad, November, 08, 2020 (HOL) – Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa u hambalyeeyay Madaxweynaha cusub ee loo doortay ee dalka Mareykanka, Joe Biden iyo ku xigeenkiisa Kamala Harris.
← ONLF vice chairman and veteran member Hassan Moalim resigns
Axad, Nov 8 , 2020-Dagaal ciidamada dowladda iyo Al-shabaab ku dhaxmaray gobolka Shabeellaha Hoose →
Talaado, Aug 25, 2020-Xasan Shiikh Maxamuud “Aniga iyo Fahad kama hadlin wax siyaasad quseeya”
Isniin, Nov 12, 2020-Saraakiishii ugu sarreysay TPLF oo xasaannada laga qaaday
Isniin, Nov 23, 2020-Puntland oo shir degdeg ah ka yeelatay khasaaraha ka dhashay duufaanta GATI ee ku dhufatay gobolka Bari